ရရှိထားတဲ့အမွေကို သင် တန်ဖိုးထားလေးမြတ်သလား | သင်တန်း
ရရှိထားတဲ့အမွေကို သင် တန်ဖိုးထားလေးမြတ်သလား
ကာကွယ်မှုပေးတဲ့ ယေဟောဝါရဲ့ချိုင့်ထဲမှာပဲ နေပါ
သင့်ကို ဂုဏ်ကျက်သရေ မရရှိအောင်လုပ်ဖို့ ဘယ်အရာကိုမှ ခွင့်မပြုပါနဲ့
မော်ကွန်းတိုက်မှ အချိန်ကိုက်ပေါ်လာတဲ့ “မေ့လို့မရနိုင်တဲ့အရာပဲ”
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကာဇက် ကာတာလန် ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကိုလံဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကီချူဝါ (ဘိုလစ်ဗီးယား) ကီချူဝါ (အိုင်ယာကူချို) ကွမ်ဂါလီ ကွမ်ယာမာ ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ဂရင်းလန်း ဂရိ ဂါ ဂျပန် ဂျပန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ ဂွာရာနီ စင်ဟာလာ စပိန် စရာနန်တွန်ဂို စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆွာတီ ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် ဇန်ဒီ ဇူးလူး တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တဟီတီ တီဂရင်ယာ တူရကီ တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နီပေါ နော်ဝေး ပန်ဂါဆီနန် ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဗန်ဒါ ဗီယက်နမ် ဘရာဇီး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မက္ကဆီကို လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မလေး မာလဂက်စီ မော်လ်တီစ် မြန်မာ ယူကရိန်း ယူရွန် ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ ရှိုနာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လူအို ဝိုလိတ်တာ ဝေယူနာအီကီ ဟန်ဂေရီ ဟီဘရူး ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် အက်စတိုးနီးယား အက်ဖစ်ခ် အင်ဂါဘာရီ အင်ဇီမာ အင်ဒက်ဘယ်လီ အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒွန်ဂါ အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အိုက်စလန် အိုရိုမို အီတလီ အီတလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီလိုကို အေးဝေး ဥဇဘက်
‘ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏နာမတော်အတွက် လူမျိုးခြားတို့ထဲက လူတစ်မျိုးကိုနုတ်ယူရန် ထိုသူတို့ထံ အာရုံလှည့်လာတော်မူ၏။’—တ. ၁၅:၁၄။
လူတချို့ဟာ ဘယ်အယူမှားသွန်သင်ချက်တွေကို လက်ခံယုံကြည်ထားကြသလဲ။ အဲဒီသွန်သင်ချက်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကြောင့် မယုံကြည်ကြသလဲ။
အပြစ်နဲ့သေခြင်းကနေ ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လို ကယ်တင်ခံရကြသလဲ။
ယေဟောဝါရဲ့ အကြွင်းမဲ့ပိုင်သအုပ်စိုးမှုနဲ့ လူ့သမာဓိစောင့်သိမှု ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်သဘောထား ဘယ်လိုရှိသလဲ။
၁၊ ၂။ (က) ‘ဒါဝိဒ်ရဲ့တဲ’ က ဘာလဲ၊ အဲဒါက ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပြန်တည်ဆောက်ခံရသလဲ။ (ခ) ယနေ့အချိန်မှာ ဘယ်သူတွေက ယေဟောဝါရဲ့ကျေးကျွန်တွေအဖြစ် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေကြသလဲ။
အေဒီ ၄၉၊ ဂျေရုဆလင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ သမိုင်းဝင်အစည်းအဝေးမှာ ယာကုပ် ဒီလိုပြောခဲ့တယ်– “ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏နာမတော်အတွက် လူမျိုးခြားတို့ထဲမှ လူတစ်မျိုးကို နုတ်ယူရန် ထိုသူတို့ထံ ဦးဆုံးအကြိမ် အာရုံလှည့်လာတော်မူကြောင်း ရှုမောင် [ပေတရု] အသေးစိတ် ပြောပြခဲ့ပြီ။ ထိုအကြောင်းအရာသည် ပရောဖက်ကျမ်းစကားများနှင့် ညီ၏။ ထိုတွင် ရေးထားသည်ကား ‘ထို့နောက် ငါပြန်လာ၍ ပြိုလဲလျက်ရှိသော ဒါဝိဒ်၏တဲကို ပြန်တည်ဆောက်မည်။ ထိုတဲ၏ပြိုပျက်ရာများကိုလည်း ပြုပြင်ပြီးလျှင် ပြန်လည်တည့်မတ်စေမည်။ ငါ၏နာမဖြင့်သမုတ်သော လူမျိုးခြားအပေါင်းနှင့်အတူ ကျန်ကြွင်းသောသူတို့သည် ယေဟောဝါဘုရားကို အားထုတ်ရှာဖွေမည့်အကြောင်း ဖြစ်၏ဟု ဤအမှုကို စီရင်တော်မူသော ယေဟောဝါဘုရား မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအရာများကို ရှေးအချိန်မှစ၍ သိစေတော်မူပြီ။’”—တ. ၁၅:၁၃-၁၈။
၂ ဘုရင်ဇေဒကိ နန်းကျသွားတဲ့အခါ ‘ဒါဝိဒ်ရဲ့တဲ [ဒါမှမဟုတ်၊ မင်းဆက်]’ ပြိုလဲသွားတယ်။ (အာ. ၉:၁၁) ဒါပေမဲ့ အဲဒီ “တဲ” ဟာ ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ယေရှု ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ပြန်တည်ဆောက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ (ယေဇ. ၂၁:၂၇; တ. ၂:၂၉-၃၆) ယာကုပ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဒီပရောဖက်ပြုချက်က ဂျူးတွေနဲ့ လူမျိုးခြားတွေဟာ ယေရှုနဲ့အတူ ကောင်းကင်မှာ ဘုရင်အဖြစ် နန်းထိုင်ကြမယ်ဆိုတာကိုလည်း ကြိုဟောခဲ့တယ်။ ယနေ့အချိန်မှာ ဘိသိက်ခံခရစ်ယာန်အကြွင်းအကျန်တွေနဲ့ သန်းနဲ့ချီတဲ့ “အခြားသိုး” တွေဟာ ယေဟောဝါရဲ့ကျေးကျွန်တွေအဖြစ် ကျမ်းစာအမှန်တရား ကြေညာခြင်းလုပ်ငန်းမှာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေကြတယ်။—ယော. ၁၀:၁၆။
၃၊ ၄။ ဂျူးတွေဟာ ဗာဗုလုန်မှာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ယေဟောဝါနဲ့ဆက်ပြီး ရင်းနှီးနေနိုင်ခဲ့သလဲ။
၃ ဂျူးတွေ ဗာဗုလုန်ကို သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းသွားခံရတဲ့အခါ ‘ဒါဝိဒ်ရဲ့တဲ’ ပြိုလဲသွားခဲ့တယ်။ ဗာဗုလုန်မှာက အယူမှားဝတ်ပြုရေးတွေ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ အတွက် ဘုရားသခင့်လူမျိုးတွေဟာ အနှစ် ၇၀ အတွင်းမှာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဆက်သစ္စာရှိနိုင်မလဲ။ ယနေ့ စာတန့်လောကအလယ်မှာ ယေဟောဝါရဲ့လူမျိုး ဆက်သစ္စာရှိနေနိုင်တဲ့နည်းအတိုင်း သူတို့လည်း ဆက်သစ္စာရှိခဲ့ကြတယ်။ (၁ ယော. ၅:၁၉) ယေဟောဝါရဲ့ကျေးကျွန်တွေမှာ အထူးအမွေတစ်မျိုး ရရှိထားတဲ့အတွက် အဲဒါက ဆက်သစ္စာတည်ကြည်ဖို့ ထောက်ကူပေးတယ်။
၄ ယနေ့အချိန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အမွေတစ်ခုအဖြစ် အစအဆုံးပါတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာ ရရှိထားကြတယ်။ ဗာဗုလုန်ရောက်သွားတဲ့ ဂျူးတွေမှာတော့ ကျမ်းစာအပြည့်အစုံ မရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးပါဝင်တဲ့ မောရှေပညတ်ကိုတော့ သူတို့ သိတယ်။ သူတို့ဟာ “ဇိအုန်သီချင်း” နဲ့ သုတ္တံစကားများစွာကို သိကြပြီး ယေဟောဝါရဲ့ အစောပိုင်း သစ္စာရှိကျေးကျွန်တွေအကြောင်းလည်း သိတယ်။ အဲဒီဂျူးတွေဟာ သူတို့ရဲ့နေရင်းပြည်ကို သတိရတဲ့အခါ ငိုကြတယ်၊ ယေဟောဝါကို သူတို့ မမေ့ခဲ့ကြဘူး။ (ဆာလံ ၁၃၇:၁-၆ ကိုဖတ်ပါ။) အဲဒါတွေက အယူမှားသွန်သင်ချက်နဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကြားမှာ သူတို့ကို ယေဟောဝါနဲ့ ဆက်ပြီး ရင်းနှီးနေစေတယ်။
၅။ ရှေးခေတ် ဗာဗုလုန်နဲ့ အီဂျစ်တွေက ဘယ် သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားတွေကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသလဲ။
၅ ဗာဗုလုန်လူမျိုးတွေဟာ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြတယ်။ အဲဒီမှာပါဝင်တဲ့ ဘုရားသုံးပါးက စင်း (လဘုရား)၊ ရှာမက် (နေဘုရား) နဲ့ အက်ရှ်တာ (မျိုးအောင်ခြင်းနဲ့ စစ်တို့ရဲ့ဘုရားမ) တို့ဖြစ်တယ်။ ရှေးခေတ်အီဂျစ်လူမျိုးတွေလည်း ခမည်းတော်၊ မယ်တော်၊ သားတော် ဘုရားသုံးပါးပါဝင်တဲ့ ဘုရားကို ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီဘုရားတွေက သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ဟာ အမြဲ တန်းတူဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်မခံရဘူး။ အီဂျစ်တွေရဲ့ သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားတစ်မျိုးက ဘုရား အိုဆိုက်ရစ်၊ ဘုရားမ အိုက်စစ်နဲ့ သားတော်ဟောရပ်စ်တို့ဖြစ်တယ်။
၆။ သုံးပါးတစ်ဆူကို ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မလဲ။ ယေဟောဝါရဲ့လူတွေ ဘာကြောင့် အဲဒီအယူဝါဒကို မယုံကြည်ကြသလဲ။
၆ ယနေ့အချိန်မှာ ခရစ်ယာန်ဘောင်ကလည်း ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော် ပါဝင်တဲ့ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားရှိတယ်လို့ သွန်သင်တယ်။ အဲဒီသွန်သင်ချက်က ယေဟောဝါရဲ့ အကြွင်းမဲ့ပိုင်သအုပ်စိုးမှုအာဏာကို ထိခိုက်စေတယ်၊ အကြောင်းကတော့ ကိုယ်တော်ဟာ ဘုရားအနေနဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံပဲ ပါဝင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ခံရလို့ပဲ။ ယေဟောဝါရဲ့လူတွေဟာ ဒီအယူမှားသွန်သင်ချက်တွေကို မယုံကြည်ကြဘူး၊ သူတို့က “ငါတို့ရဲ့ဘုရားသခင် ယေဟောဝါက တစ်ပါးတည်းသော ယေဟောဝါဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့ ကျမ်းချက်ကို သဘောတူလက်ခံကြတယ်။ (တရား. ၆:၄) ယေရှုက ဒီစကားတွေကို ကိုးကားခဲ့ပြီး ခရစ်ယာန်စစ်တွေဟာ ယေရှုပြောတဲ့စကားကို ယုံကြည်ကြတယ်။—မာ. ၁၂:၂၉။
၇။ လူတစ်ယောက်ဟာ ခရစ်ယာန်စစ်တစ်ဦးအဖြစ် နှစ်ခြင်းမခံခင်မှာ ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာကို ယုံကြည်ဖို့လိုသလဲ။
၇ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒဟာ မိမိရဲ့နောက်လိုက်တွေကို ယေရှုပေးခဲ့တဲ့တာဝန်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်၊ ယေရှုက ‘လူမျိုးတကာမှလူတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျက် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်၏နာမ၌ နှစ်ခြင်းပေးကြလော့’ လို့ပြောခဲ့တယ်။ (မ. ၂၈:၁၉) လူတစ်ဦးက ခရစ်ယာန်စစ်တစ်ဦးအဖြစ်၊ ယေဟောဝါသက်သေတစ်ဦးအဖြစ် နှစ်ခြင်းခံချင်တယ်ဆိုရင် ခမည်းတော်ယေဟောဝါဟာ အကြွင်းမဲ့ပိုင်သအုပ်စိုးရှင်ဖြစ်တယ်၊ ယေရှုက ဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီး ရွေးနုတ်ဖိုးပေးဖို့ မြေကြီးပေါ် ရောက်လာတယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ရမယ်။ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်ဆိုတာ ဘုရားသခင့်စွမ်းအားဖြစ်ပြီး သုံးပါးတစ်ဆူရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည်ရမယ်။ (က. ၁:၂) သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒကို ယုံကြည်နေသူတစ်ယောက်ဟာ ယေဟောဝါဘုရားကို အကြွင်းမဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံတဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ နှစ်ခြင်းခံလို့မရဘူး။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူသွန်သင်ချက်က ဘုရားသခင်ကို ရှုတ်ချဂုဏ်ဖျက်တယ်ဆိုတာ သိရတာကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားတဲ့ အမွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်။
၈။ ဗာဗုလုန်လူမျိုးတွေက ဘုရားတွေ၊ နတ်ဆိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုယုံကြည်ကြသလဲ။
၈ ဗာဗုလုန်လူမျိုးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ဘုရားတွေအပြင် နတ်ဆိုးနဲ့ နတ်ဆိုးပညာကိုလည်း ယုံကြည်လိုက်စားကြတယ်။ နတ်ဆိုးတွေက လူတွေကို ဖျားနာအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ ဗာဗုလုန်လူမျိုးတွေ ယုံကြည်ကြတယ်၊ လူတွေ ဟာ နတ်ဆိုးရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့ သူတို့ဘုရားတွေဆီ ဆုတောင်းကြတယ်လို့ စွယ်စုံကျမ်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားတယ်။
၉။ (က) ဂျူးများစွာဟာ နတ်ဆိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေကို ဘယ်လို သိလာကြသလဲ။ (ခ) နတ်ဆိုးပညာကနေ ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကာကွယ်ခံရကြသလဲ။
၉ ဂျူးများစွာဟာ ဗာဗုလုန်ရောက်နေချိန်မှာ မှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေအကြောင်း သိလာတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဂျူးများစွာဟာ နတ်ဆိုးတွေက ကောင်းနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဂရိအယူအဆကို ယုံကြည်လက်ခံလာကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ နတ်ဆိုးပညာ၊ ဒါမှမဟုတ် နတ်ဆိုးနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းက အန္တရာယ်ရှိတယ်၊ မှားတယ်လို့ ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို သင်ပေးတယ်။ အဲဒီအမှန်တရားကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားတဲ့ အမွေတစ်ခုပဲ။ (ဟေရှာ. ၄၇:၁၊ ၁၂-၁၅) ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ယေဟောဝါမိန့်မှာထားတာကို နာခံပြီး နတ်ဆိုးပညာကို မလိုက်စားတဲ့အတွက် ကာကွယ်ခံရကြတယ်။—တရားဟောရာ ၁၈:၁၀-၁၂ နဲ့ ဗျာဒိတ် ၂၁:၈ တို့ကိုဖတ်ပါ။
၁၀။ မဟာဗာဗုလုန်ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေနဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေက ဘယ်ကနေ ဆင်းသက်လာတာလဲ။
၁၀ အလားတူပဲ ယနေ့ အယူမှားဝတ်ပြုရေးမှာရှိတဲ့ လူများစွာဟာ ရှေးခေတ်ဗာဗုလုန်ကလူတွေလိုပဲ နတ်ဆိုးပညာကို လိုက်စားကြတယ်။ ဒါကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာက ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အယူမှားဝတ်ပြုရေးအားလုံးကို မဟာဗာဗုလုန်လို့ ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ (ဗျာ. ၁၈:၂၁-၂၄) အယူမှားဝတ်ပြုရေးတွေဟာ ရှေးခေတ်ဗာဗုလုန်ဝတ်ပြုရေးနဲ့ တူတယ်၊ အကြောင်းကတော့ မှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေနဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေက အဲဒီကနေ ဆင်းသက်လာလို့ပဲ။ နတ်ဆိုးပညာ၊ အရုပ်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ တခြားအပြစ်တွေကြောင့် မကြာခင်မှာ မဟာဗာဗုလုန် ဖျက်ဆီးခံရတော့မယ်။—ဗျာဒိတ် ၁၈:၁-၅ ကိုဖတ်ပါ။
၁၁။ အဖွဲ့အစည်းထုတ်စာပေတွေမှာ နတ်ဆိုးပညာအကြောင်း ဘာတွေ သတိပေးထားသလဲ။
၁၁ နတ်ဆိုးအတတ်ပညာကို ငါ “သည်းမခံနိုင်” ဘူးလို့ ယေဟောဝါ ပြောခဲ့တယ်။ (ဟေရှာ. ၁:၁၃) ၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ လူများစွာဟာ နတ်ဆိုးအတတ်ပညာကို လိုက်စားခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် မေ ၁၈၈၅ ဇိအုန်ကင်းမျှော်စင်မှာ ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်– “လူသေတွေဟာ တခြားတစ်နေရာမှာ ဆက်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်က အခုမှ ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါက ရှေးခေတ်ဝတ်ပြုရေးတွေရဲ့ အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပုံပြင်ဒဏ္ဍာရီတွေကို အခြေခံတယ်။” နတ်ဆိုးတွေဟာ သေသွားတဲ့သူတွေအဖြစ် ဟန်ဆောင်ပြီး အသက်ရှင်နေသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်၊ ဒါကြောင့် နတ်ဆိုးတွေဟာ လူများစွာရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်ကြတယ်လို့လည်း အဲဒီကင်းမျှော်စင်မှာ ဖော်ပြထားတယ်။ အစောပိုင်းအချိန်ကထုတ်ဝေတဲ့ နတ်ဆိုးပညာအကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာ ဘာပြောသလဲ ဆိုတဲ့ စာအုပ်နဲ့ သိပ်မကြာခင်က အဖွဲ့အစည်းထုတ်စာပေတွေမှာလည်း အလားတူအကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြထားတယ်။
လူသေတွေ တစ်နေရာရာမှာ ညှဉ်းဆဲခံနေရသလား
၁၂။ လူသေတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာရေးဖို့ ရှောလမုန်ကို ဘုရားသခင် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သလဲ။
၁၂ “အမှန်တရား သိလာကြသူအားလုံး” ဒီမေးခွန်းကို ဖြေနိုင်တယ်။ (၂ ယော. ၁) ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ရှောလမုန်ပြောခဲ့တဲ့ ဒီစကားကို သဘောတူလက်ခံကြမှာ သေချာတယ်– “အသက်ရှင်နေတဲ့ခွေးက သေနေတဲ့ခြင်္သေ့ထက် ပိုကောင်း [တယ်]။ အသက်ရှင်သူတွေက သူတို့သေရမယ်ဆိုတာ သိတယ်။ သေလွန်သူတွေကတော့ ဘာကိုမှ မသိဘူး။ . . . သင့်လက်နဲ့ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် ခွန်အားရှိသမျှနဲ့လုပ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်သွားနေတဲ့သင်္ချိုင်းမှာ ဘာအလုပ်မှမရှိ၊ ဘာအစီအစဉ်မှမရှိ၊ ဘာအသိပညာမှမရှိ၊ ဘာဉာဏ်ပညာမှမရှိလို့ပဲ။”—ဒေ. ၉:၄၊ ၅၊ ၁၀၊ ကဘ။
၁၃။ ဂျူးတွေဟာ ဂရိဝတ်ပြုရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကနေ ဘယ်ယုံကြည်ချက်ကို လက်ခံခဲ့ကြသလဲ။
၁၃ ဂျူးလူမျိုးတွေဟာ လူသေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှန်တရားကို သိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဟာအလက်ဇန္ဒားရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေလက်ထဲမှာ ဂရိ ပြိုကွဲသွားတဲ့အခါ ယုဒနဲ့ ဆီးရီးယားကို ပေါင်းစည်းဖို့ ဂရိဝတ်ပြုရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို အသုံးပြုခဲ့တယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ဂျူးတွေဟာ ဝိညာဉ်မသေဘူး၊ မြေအောက်ကမ္ဘာတစ်ခုမှာ ဝိညာဉ်တွေကို နှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ အယူမှားသွန်သင်ချက်တွေကို ယုံကြည်လာကြတယ်။ မြေအောက်ကမ္ဘာမှာ ညှဉ်းဆဲတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်က ဂရိကနေ အစပြုခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ တခြားကမ္ဘာတစ်ခုမှာ သန်မာ ထွားကြိုင်းတဲ့ဘုရားနဲ့ နတ်ဆိုးတွေရှိပြီး လူတွေကို ညှဉ်းဆဲတယ်လို့ ဗာဗုလုန်လူမျိုးတွေ ယုံကြည်ကြတယ်လို့ ဘေဘီလိုနီးယားနှင့် အဆီးရီးယားတို့၏ ဘာသာတရားဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ဖော်ပြထားတယ်။ ဒါကြောင့် ဗာဗုလုန်လူမျိုးတွေဟာ ဝိညာဉ်မသေဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက်ခံယုံကြည်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်။
၁၄။ သေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယောဘနဲ့ အာဗြဟံ ဘာသိခဲ့သလဲ။
၁၄ ဖြောင့်မတ်သူယောဘမှာ သမ္မာကျမ်းစာမရှိပေမဲ့ လူသေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှန်တရားကို သူသိခဲ့တယ်။ သူသေသွားတဲ့အခါ မေတ္တာရှင်ဘုရားသခင် ယေဟောဝါက သူ့ကို အသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးချင်စိတ် ပြင်းပြတယ်ဆိုတာ သူသိတယ်။ (ယောဘ ၁၄:၁၃-၁၅) အာဗြဟံလည်း ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ (ဟေဗြဲ ၁၁:၁၇-၁၉ ကိုဖတ်ပါ။) မသေနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို ပြန်ရှင်အောင် လုပ်တယ်ဆိုတာ ယုတ္တိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် လူသေပေမဲ့ ဝိညာဉ်မသေဘူးဆိုတာကို သူတို့ မယုံကြည်ကြဘူး။ လူသေတွေရဲ့အခြေအနေကို သိဖို့နဲ့ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်ဖို့ ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော်က အာဗြဟံနဲ့ ယောဘကို ကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။ ဒီအမှန်တရားတွေကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ရထားတဲ့ အမွေတစ်ခုပဲ။
အယူမှားယုံကြည်ချက်တွေကနေ ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုကာကွယ်ခံရသလဲ
“အို အစ္စရေးလူတို့ နားထောင်ကြပါ။ ငါတို့ရဲ့ဘုရားသခင် ယေဟောဝါက တစ်ပါးတည်းသော ယေဟောဝါဖြစ်တယ်။”—တရား. ၆:၄၊ ကဘ။
‘လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အတတ်တွေကို ငါ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။’—ဟေရှာ. ၁:၁၃၊ ကဘ။
“သေလွန်သူတွေကတော့ ဘာကိုမှ မသိဘူး။”—ဒေ. ၉:၅၊ ၁၀၊ ကဘ။
ကျွန်ုပ်တို့ “ရွေးနုတ်ဖိုး” လိုအပ်
၁၅၊ ၁၆။ အပြစ်နဲ့သေခြင်းကနေ ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လွတ်မြောက်ကြသလဲ။
၁၅ အပြစ်နဲ့သေခြင်းကနေ ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘယ်လိုကယ်တင်တယ်ဆိုတာ သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်သင့်တယ်။ (ရော. ၅:၁၂) ယေရှုဟာ “သူတစ်ပါးကိုစေစားရန် ကြွလာသည်မဟုတ်။ သူတစ်ပါး၏အစေကိုခံ၍ လူများအတွက် ရွေးနုတ်ဖိုးအဖြစ် အသက်ကိုစွန့်ရန် ကြွလာ” တယ်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ သိကြတယ်။ (မာ. ၁၀:၄၅) ‘ခရစ်တော်ယေရှု၏ ရွေးနုတ်ဖိုးအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြ’ တယ်ဆိုတာ သိရလို့ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ။—ရော. ၃:၂၂-၂၄။
၁၆ ပထမရာစုက ဂျူးတွေနဲ့ လူမျိုးခြားတွေဟာ သူတို့အပြစ်တွေအတွက် နောင်တရပြီး ယေရှုရဲ့ ရွေးနုတ်ဖိုးပူဇော်သကာကို ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလိုမလုပ်ရင် သူတို့ ခွင့်လွှတ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ ယနေ့အချိန်မှာလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ။ (ယော. ၃:၁၆၊ ၃၆) လူတစ်ယောက်က သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၊ ဝိညာဉ်မသေ စတဲ့ မှားယွင်းတဲ့အယူဝါဒတွေကို လက်ခံယုံကြည်ထားတယ်ဆိုရင် ရွေးနုတ်ဖိုးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ ရွေးနုတ်ဖိုးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားနိုင်ကြတယ်။ ‘ချစ်တော်မူသော [ဘုရားသခင့်] သားတော်အားဖြင့် ငါတို့သည် ရွေးနုတ်တော်မူခြင်းတည်းဟူသော အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို ခံရ၏’ ဆိုတဲ့အမှန်တရားကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြတယ်။—ကော. ၁:၁၃၊ ၁၄။
၁၇၊ ၁၈။ ယေဟောဝါသက်သေတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ဘယ်ကနေ သိရှိနိုင်သလဲ။ အဲဒါတွေကို လေ့လာတာက ဘာကြောင့် အကျိုးရှိသလဲ။
၁၇ ကျွန်ုပ်တို့ရထားတဲ့ အထူးအမွေထဲမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားသခင် သွန်သင်ပေးတဲ့ သွန်သင်ချက်တွေ၊ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေး၊ ကောင်းချီးပေးခဲ့တာတွေ ပါဝင်တယ်။ နှစ်ချုပ်စာအုပ်တွေမှာဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ ယေဟောဝါရဲ့လူတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းတွေပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းလုပ်ရပ် ဗီဒီယို အပိုင်း ၁၊ ၂ နဲ့ ယေဟောဝါသက်သေများ—ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကြွေးကြော်သူများ စာအုပ်မှာ ယေဟောဝါသက်သေတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာဆိုရင် ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေရဲ့ တွေ့ကြုံမှုတွေ မကြာခဏပါတယ်။
၁၈ အစ္စရေးလူမျိုးဟာ သူတို့ကို ဘုရားသခင် အီဂျစ်ပြည်ကျွန်ဘဝကနေ ဘယ်လိုကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားခြင်းကနေ အကျိုးရရှိခဲ့ကြတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ယေဟောဝါအဖွဲ့အစည်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို စဉ်းစားသုံးသပ်ခြင်းကနေ အကျိုးခံစားကြရတယ်။ (ထွ. ၁၂:၂၆၊ ၂၇) မောရှေအသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အစ္စရေးလူတွေကို ဒီလိုပြောခဲ့တယ်– “ရှေးအချိန်ကို ပြန်သတိရပါ။ အရင်လူမျိုးဆက်တွေ တည်ရှိခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင့်အဖေကို မေးကြည့်ပါ။ သူပြောပြပါလိမ့်မယ်။ အသက်ကြီးသူတွေကို မေးကြည့်ပါ။ သူတို့ပြောပြပါလိမ့်မယ်။” (တရား. ၃၂:၇၊ ကဘ) ‘ယေဟောဝါရဲ့လူတွေနဲ့ ကိုယ်တော့်စားကျက်ထဲက သိုးအုပ်ဖြစ်တဲ့’ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘုရားသခင်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ချီးမွမ်းကြပြီး ကိုယ်တော့်အံ့ဖွယ်အမှုတွေအကြောင်း လူတွေကို ပြောပြကြတယ်။ (ဆာ. ၇၉:၁၃) ဒါ့အပြင် ယေဟောဝါရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာပြီး သင်ခန်းစာယူသင့်တယ်၊ အဲဒါက ကိုယ်တော့်ကို ဆက်အမှုဆောင်ဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
၁၉။ အမှန်တရားကိုသိထားတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
၁၉ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဆိုးညစ်တဲ့လောကအမှောင်ထုအောက်မှာ မရှိဘဲ အမှန်တရားအလင်း ရရှိထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြတယ်။ (သု. ၄:၁၈၊ ၁၉) ဒါကြောင့် ဘုရားသခင့်တရားစကားတော်ကို ဝီရိယရှိရှိ လေ့လာပြီး တခြားသူတွေကို အမှန်တရားအကြောင်း ထက်ထက်သန်သန် ပြောပြကြစို့။ အခုလိုပြောခဲ့တဲ့ ဆာလံဆရာရဲ့ ခံစားချက်မျိုး ကျွန်ုပ်တို့မှာ ရှိကြတယ်– “ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းရဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောမယ်။ အို ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်က ကျွန်တော့်ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက သွန်သင်ပေးတယ်။ ကိုယ်တော်ရဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေအကြောင်း အခုထိ ကျွန်တော်ကြေညာနေတုန်းပဲ။ အို ဘုရားသခင်၊ ကျွန်တော်အသက်ကြီးပြီး ဆံပင်ဖြူသွားချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကို မပစ်ထားပါနဲ့။ ဒါမှ နောက်မျိုးဆက်တွေကို ကိုယ်တော့်တန်ခိုးအကြောင်း၊ နောင်လာနောက်သားတွေကို ကိုယ်တော့်ခွန်အားအကြောင်း ပြောပြနိုင်မယ်။”—ဆာ. ၇၁:၁၆-၁၈၊ ကဘ။
၂၀။ ဘယ်အရာနှစ်ခုက ဆက်စပ်နေသလဲ။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လိုခံစားရသလဲ။
၂၀ ယေဟောဝါထံ ဆက်ကပ်အပ်နှံထားတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အကြွင်းမဲ့ပိုင်သအုပ်စိုးမှုနဲ့ လူတွေရဲ့သမာဓိစောင့်သိမှု ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို အသိအမှတ်ပြုကြတယ်။ ဒါကြောင့် ယေဟောဝါဟာ စကြဝဠာအကြွင်းမဲ့ပိုင်သအုပ်စိုးရှင်ဖြစ်တယ်၊ အကြွင်းမဲ့ဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုကို ရထိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြေညာကြတယ်။ (ဗျာ. ၄:၁၁) ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ယေဟောဝါရဲ့စွမ်းအားတော်အကူအညီနဲ့ စိတ်နှိမ့်ချသူတွေကို သတင်းကောင်းဟောပြောတယ်၊ စိတ်နှလုံးကြေကွဲ၊ ဝမ်းနည်းနေသူတွေကို နှစ်သိမ့်ပေးကြတယ်။ (ဟေရှာ. ၆၁:၁၊ ၂) စာတန်ဟာ ဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်တွေနဲ့ လူသားတွေကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ အဲဒီကြားထဲမှာ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားတဲ့အမွေက ယေဟောဝါနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မြဲစေပြီး ကိုယ်တော့်ကို အခုနဲ့ ထာဝစဉ် အမှုဆောင်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။—ဆာလံ ၂၆:၁၁ နဲ့ ၈၆:၁၂ တို့ကိုဖတ်ပါ။
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃
ယေဟောဝါသက်သေများ— သက်ဝင်လှုပ်ရှား ယုံကြည်ခြင်းတရား အပိုင်း ၁– မှောင်မိုက်မှ လွတ်မြောက်ကြ
ယေဟောဝါသက်သေများ— သက်ဝင်လှုပ်ရှား ယုံကြည်ခြင်းတရား အပိုင်း ၂– အလင်းထွန်းလင်းပါစေ